जन्डिसको घरेलु उपचार के हो ? - Nepali News Nepal
जन्डिसको घरेलु उपचार के हो ?
डिसेम्बर 4, 2019 डिसेम्बर 4, 2019 Bishwaghatana0Comments blood, dark urine, hematology, hepatology, itching, liver, pale stool, yellow eyes, yellow skin, जन्डिस, जन्डिस लक्ष्ण
जण्डीस एउटा यस्तो लक्षण हो जुन शरीरको विभिन्न भागमा पहेँलोपनको रुपमा देखा पर्ने गर्द छ ।
छोटकरी भन्नु पर्दा आँखा,छाल र मुखभित्र पहेले हुनुलाई जन्डिस भन्ने गरिन् छ तर यो कुनै रोग चाहि होइन तर विभिन्न रोगमा देखिने लक्षण मात्र हो। साधारणतया रगतमा बिलिरूविनको मात्रा एक मिलिग्राम र १०० एमएलभन्दा कम हुन्छ। बिलिरुविनको मात्रा तीन मिलिग्रामभन्दा बढी भएमात्र आँखा पहेँलो देखिन्छ जसलाई जन्डिस भनिन्छ । विश्वमा ५ देखि १० प्रतिशत जन्मजात यस्ता समस्या देखापर्दछ । यसलाई गिलबर्ट सिन्ड्रोम भनने गरिन् छ ।
जन्डिस लक्ष्ण के के हुन् ?
जब कुनै मानिसमा जन्डिस देखा पर्छ तब खान मन लाग्दैन ,जिउ गल्दै जानु,बान्ता हुनु,पेट दुख्नु,पिसाव र आँखा पहेँलो हुँदै जाने साथै ज्वरो पनि आउने गर्छ ।
जन्डिसको घरेलु उपचार के के हुन् ?
खानेपानी ५ मिनेटसम्म भकभक उमाल्ने गरेर मात्रै पिउनुपर्छ। जन्डिस लाग्दा अनावश्यक औषधि खानु हुँदैन । सादा खाने कुरा खानु पर्छ,रातो मासु खानु हुँदैन् साथै अण्डाको पहेलो भाग खानु हुँदैन् । गुलियो स्वाद नभएका फलफूल, उखु, ग्लुकोज, मेवा, जडीबुटी तथा हर्बल औषधिको सेवन गर्नु हुँदैन् । रायोको साग, काउली, बन्दा, फर्सीको मुन्टा, सिमी, तितेकरेला, लौका, स्कुस, आलु, च्याउ, फर्सी हरियो र पाकेको चम्सुर, पालुंगो, मेथीको साग, सिधेनुन जिरा हालेर उसिनेको तरकारी खान हुन्छ । जिउ चिलाउन थालेमा भने नुन नखानु राम्रो हुन्छ ।
← पारस खड्का
१३ औं साग क्रिकेट(पुरुष): नेपाल बिरुद्ध भुटान →
गायक प्रेमराजा महत दम्पतिलाई कोरोना संक्रमण भेटियो